အိဖူး၏ စာမျက်နှာ: November 2008
ကိုဗီ tag ထားတာကို ဖြေခြင်း
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မကြိုက်တဲ့ (၁၀) ချက် ...တော်တော်များများထွက်လာမလားပဲနော် .. အဆိုးဆုံးလေးတွေချရေးတာပေါ့ ..
(၁) အတွေးခေါင်လွန်းတာကို မကြိုက်ဘူး
အဲဒိကိစ္စက ငယ်ငယ်ကတည်းက လူကြီးတွေပြောလေ့ရှိတယ်။ “ဘာကိုဘယ်လိုတွေးနေမှန်းမသိဘူး”တဲ့။ ငယ်ငယ်ကတော့ ခံပြင်းရမှန်းမသိပေမဲ့ နည်းနည်းကြီးလာတော့စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်ဖြစ်လာတယ် .. အခုတော့ တွေးခေါ်တာတွေက အရင်ကလောက်တော့ မကြောင်တော့ပါဘူးလေ .. ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှုတွေ တိုးတက်လာတာပေါ့ .. ဒါပေမဲ့လည်း ခက်တယ်နော် .. တွေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်မဟုတ်လား .. ကိုယ်တွေးတာ မှားနေလား လမ်းလွဲနေလား ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘယ်လို ပြန်စဉ်းစားမိမှာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ..
(၂) အပြောအဆိုမတတ်တာကို မကြိုက်ဘူး
လူကြီးတွေနဲ့ ငယ်ငယ်ကဆို စကားပြောလေ့မရှိဘူး .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆို အိဖူးက စကားအများဆုံးပဲ .. ဒါပေမဲ့ ဆွေမျိုးထဲက ကြောက်ရတဲ့လူတွေဆို ဝေးဝေးကရှောင်တယ် ..စကားပြောရမှာစိုးလို့လေ .. ပြောရမှာကို ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး .. လူကြီးတွေကို မပြောသင့်တာများပြောမိလေမလား .. အဲလိုဆို ဆူခံထိမှာလား .. ထုံးစံအတိုင်း အတွေးခေါင်ပြီး စကားမပြောဘူး .. အခုအသက်ကြီးလာတော့ ပြောတော့ပြောရဲလာပါတယ် .. ပြောရဲပြန်တော့ အပေါက်အလမ်းကမတည့်၊ ဇာတ်လမ်းကလည်နေပြီးဘာတွေပြောမိမှန်းမသိဘူး .. စိတ်ညစ်ပါ့အခုတော့ သတ္တိတွေရှိနေပါပြီ ..
(၃) သတိမရှိ စိတ်နဲ့လူနဲ့ လမိုင်းမကပ်တာကို မကြိုက်ဘူး
အဲဒိကိစ္စကတော့ အမြဲတမ်းဆူခံထိတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့ .. စာအုပ်ဖတ်နေတယ် .. စာအုပ်ဖတ်နေတုန်း မေမေက တစ်ခုခုခိုင်းတယ် .. ဥပမာ အ၀တ်လျှော်စက်လည်ဖို့ပေါ့ .. စာအုပ်ထဲစိတ်ပါနေတော့ ဆူမှာစိုးလို့သာ ထလုပ်တာ စိတ်က စာအုပ်မှာပဲကျန်ခဲ့တယ် .. အ၀တ်လျှော်စက်ထဲရေဖြည့်ပြီးတော့ ပလပ်တပ်ထားလား ဘာလား မကြည့်တော့ဘူး ..မေမေလာကြည့်တော့မှ လျှော်စက်ကမလည်တော့ ဆူတာပေါ့ .. အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်လွန်းတော့ မေမေက “ဘာမှလည်း စိတ်ချလက်ချခိုင်းလို့မရပါလား ” လို့ ပြောရော .. အဲလိုကျတော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူပေါ့ ..(မမေ့တတ်အောင် တရုတ်သရဲကားထဲကလို နဖူးမှာ စာကပ်ထားမှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်)
(၄) တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးလွန်းတာကို မကြိုက်ဘူး
စာမေးပွဲဖြေခါနီးဆို အဲဒိစိတ်မျိုးခဏခဏဖြစ်တယ် .. ဘယ်လိုပြောရမလဲ .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စာစုကျက်တယ်ပေါ့ .. အဲဒိအခါကျရင် ကိုယ်က စာကိုအရင်ရတယ်ဆိုရင် “ငါတယ်ဟုတ်ပါလား” ..သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ဥာဏ်ကောင်းတယ် ဘာဖြစ်တယ်နဲ့ ပြောတာပေါ့ .. အဲလိုဆို နည်းနည်းမြှောက်သွားတယ် .. ပြီးရင် သူတို့ကျက်နေတုန်း ကိုယ်က မကျက်တော့ပဲ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ .. အေးဆေးပါဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဝင်သွားရော .. ခက်တယ် .. ကိုယ်ဆက်ကျက်နေရင်ပိုရတာပေါ့နော် .. စာမေးပွဲဖြေတော့ တစ်လုံးတောင် မကျန်ပဲဖြေနိုင်မှာပေါ့ .. အခုတော့ စိတ်ကြီးဝင်ပြီး ဆက်မကျက်တော့ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်တော့ဖြေတော့ဖြေနိုင်ပါရဲ့ .. ဟိုတစ်လုံးကျန် ဒီတစ်လုံးကျန်တွေနဲ့ ..
(၅) မျိုသိပ်ထားတာကို မကြိုက်ဘူး
စိတ်ထဲခုစရာတွေ ဘာတွေရှိလာပြီဆိုရင် (စိတ်ခုတဲ့လူကလည်း ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းဆိုရင်) မျိုသိပ်နေမိတတ်တယ် .. ဘာမှမပြောပဲနေပါများတော့ စိတ်ထဲမှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးပေါ့ .. ကိုယ်ပဲဒုက္ခများတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြင်ရမှာပေါ့နော် ..
(၆) လောဘကြီးတာကို မကြိုက်ဘူး
ဟီးဟီး ဒါကတော့ လူတိုင်းယေဘူယျအားဖြင့် လောဘကြီးတတ်ကြတယ်ထင်ပါတယ် .. ပုထုဇဉ်(ကင်းမုံသီး)ဆိုတော့ အနည်းနဲ့အများတော့ လောဘကြီးတာပေါ့ ..ဒီသဘောတရားကို နားလည်ပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် လောဘမကြီးချင်ဘူး .. တရားဘောင်လည်း မ၀င်ချင်ပါဘူး ..ရိုးရိုးသာမန်လူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲ လောဘကင်းချင်တယ် ..
(၇) ကိုယ်မကြိုက် သဘောမကျတဲ့လူကို မတရားကဲ့ရဲ့ချင်တာကို မကြိုက်ဘူး
ကျောင်းမှာဆို အဲလိုပဲ .. ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးပေါ့ကွာ .. ကိုယ်ကတော့ ရန်လိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီလိုပဲကြည့်မရတဲ့လူတွေ ရှိတာပဲလေ .. အဲလိုလူကို တွေ့ပြီဆိုရင်တစ်ခုခုပြောပြောမိတယ် .. တွေ့တိုင်းပြောတယ် .. ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး .. အဲလောက်လည်း မရိုင်းပါဘူး .. အပျော်သဘောပေါ့ .. အိဖူးသူငယ်ချင်းတွေကတော့ ရီနေတာပဲ .. “ကပ်ကပ်သတ်သတ် နင်မို့ပြောတတ်တယ်” တဲ့ .. ဘယ်လိုပဲရီစရာဖြစ်နေဖြစ်နေ ကဲ့ရဲ့သလိုပဲဖြစ်နေလို့ .. ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးမနေရတယ် ..
(၈) ကိုယ်ပိုင်အယူအဆကို မဖြစ်လွန်းမှ တွေးတတ်တာကို မကြိုက်ဘူး
ဒီလိုပဲပေါ့ .. စာအုပ်တွေဖတ်တော့ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလေးတွေလည်း ရှိလာပြီလေ .. လက်ခံစရာအယူအဆလေးတွေလည်း ရှိတာပေါ့ .. အဲလိုတွေများလာတော့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆဆိုတာ မတွေးတော့သလောက်ပဲ ..ကိုယ်ဖတ်ထား သိထား ကြားထားတဲ့ထဲက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် အဲဒိအတိုင်းပဲနေထိုင်လိုက်မိတယ် .. နားလည်လားဟင် .. (ဘယ်လိုပြောမလဲ follower ကြီးကို ဖြစ်လို့ ..)
(၉) သူငယ်ချင်းတွေကို သိပ်ယုံတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် အဲဒါကိုမကြိုက်ဘူး
အိဖူးက ဘော်ဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီဆို စိတ်ရောကိုယ်ပါပေါင်းတာ .. ပြီးရင် အပြည့်အ၀ယုံကြည်ထားတာက သူတို့လည်း ငါ့လိုပဲနေမှာပါလို့ .. အဲဒိလိုယုံလိုက်မိရင် လူတိုင်းက ဒီတိုင်းဘယ်နေမလဲ ပြောင်းလဲတဲ့လူကပြောင်းလဲနေတာ ..အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမယ် .. တစ်ခုခုပေါ့ .. သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပါတယ် .. ပြီးတော့ ကိ်ုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘော်ဒါတွေကို ကိုယ့်ဘက်မှာပဲရှိစေချင်တယ် ..( လောဘလေ) .. သူတို့တွေတစ်ခုခုအပြစ်ပြောကြရင်ငိုတောင်ငိုချင်တယ် .. ပြီးရင် စိတ်ကောက်ရော .. သူတို့ကတော့ စိတ်ကောက်လို့ပြန်ချော့ကြပေမဲ့ .. စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်ကယ်ဝမ်းနည်းနေပြီ .. “ငါလိုအပ်သလို သူတို့မှင့ါကိုမလိုပဲလေ” တွေးနေရော .. နံပါတ် ၁ ကလို အဆုံးထိတွေးမိတာပေါ့ ..အသက်လည်း ငယ်သေးတော့ နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းစစ်စစ်ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာ သိနေတော့လေ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာပဲလိုချင်တယ် .. ဒါပေမဲ့ ခုထိတော့ မအောင်မြင်သေးဘူး ..
(၁၀) ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲတာကို မကြိုက်ဘူး
တစ်ခုခုကိုကြိုက်တယ် .. အသည်းအသန်ကိုကြိုက်တယ် .. လိုချင်တယ် .. ရလည်းရတယ် .. သုံးတာနည်းနည်းကြာသွားရင် စိတ်ညစ်လာရော .. ပစ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင် တကယ်ကိုမေ့လောက်တဲ့အထိပစ်ထားမိတယ် .. ငယ်ငယ်ကတည်းကတွေးတတ်တာရှိတယ်မုန့်စားတယ်ပေါ့ .. မုန့်နှစ်ခုမှာ တစ်ခုကိုပဲကြိုက်တာ နောက်တစ်ခုကို မကြိုက်ဘူး .. အဲဒိလိုမျိုးဆိုရင် မကြိုက်တဲ့တစ်ခုကို ပစ်လိုက်ရင်ရရဲ့သားနဲ့ .. “ဟိုတစ်ခုကျတော့စားပြီး သူ့ကိုကျမစားရင် သူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့”ဆိုပြီး မကြိုက်တဲ့မုန့်ကိုတောင် သနားပြီးစားခဲ့ဖူးတယ် ..အခုလည်း ကိုယ်ကြိုက်တော့ကြိုက်ခဲ့ပါရဲ့ .. လက်ရှိမကြိုက်တော့လို့ မသုံးတာပဲ .. စိတ်ထဲမှာအားနာနေပြီး ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာမထားရင်ကောင်းမလား .. ပစ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား .. သူများကိုပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားနဲ့ .. လူဆိုရင်လည်း အဲလိုပဲ .. ပေါင်းလို့မကောင်းဘူးဆိုတာကိုပေါင်းကြည့်ပြီးမှ သိတယ်ဆိုလည်း လှည့်မကြည့်ချင်တော့တာက တစ်ဖက် .. အရင်ကခင်ဖူးတာလို့ အားနာတာတစ်ဖက်နဲ့ .. ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲဘူး
ကဲ ဆယ်ခုတော့ပြည့်သွားပါပြီ .. အဆိုးဆုံးလို့ထင်တာတွေကိုပဲချရေးတာနော် .. တော်တော်တောင် သိကုန်ပြီထင်တယ် .. (ရှက်လိုက်တာ)
Posted by အိဖူး at 8:52 PM4comments:
Your gurdian angle
စီဘောက်မှာ ဘယ်သူမှလာမရေးတာကိုတွေးနေတယ် ..
ဟဲဟဲ ကြောင်တယ်နော် ..
ကြိုလည်းမစဉ်းစားထားတော့ ဘာရေးရမလဲလည်းမသိ ..
The red jumpsuit apparatus ရဲ့ Your gurdian angle ဆိုတဲ့သီချင်းနားထောင်ဖူးကြလား ..
လောလောဆယ်တော့ အိဖူးရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းပေါ့ ..
သီချင်းလေးက .. ကောင်းပါတယ် ..
ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်ရင် ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးဆိုတာသိကြမှာပေါ့ ..
I will never let you fall, I'll stand up with ya forever
Even if saving you send me to heaven, it's ok. တဲ့ ..
အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေကော အဲလိုချစ်ရတဲ့သူမျိုးရှိလား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူမျိုးတွေလေ ..
အိဖူးကတော့ သီချင်းသာကြိုက်တာ အဲလောက်ချစ်ရတဲ့သူလည်းမရှိတော့
နားထောင်ရတာ တစ်မျိုးလေးပဲ ..
ကိုယ်ကဆိုပြရတာမျိုးလည်း မလိုချင်ဘူး ..
ကိုယ့်ကိုလာဆိုပြတာကိုတော့ လိုချင်သား ..
အချစ်ပဲခံချင်တယ်ပေါ့နော် .. (နရင်းအုပ်ချင်စရာပဲ)
အားရင်တော့ နားထောင်ကြည့်ကြပေါ့ ..
သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ Cat and Mouse ဆိုတဲ့သီချင်းလည်းကောင်းပါတယ်
အယ်လ်ဘမ်နာမည်က Don't you fake it တဲ့ ..
ကဲ ကဲ .. စဉ်းတော့စဉ်းစားနေတာပဲ
Posted by အိဖူး at 8:59 PM2comments: